यस्ता सोचका केटीले तपाईलाई सधै माया गर्छन् - Nepal's Online News
खोटाङ्ग समाचारघटनाफोटो फिचरबिचित्र संसारमोडेलस्वास्थ्य
यस्ता सोचका केटीले तपाईलाई सधै माया गर्छन्
कहिले काही सम्बन्धलाई बचाउन चाहदा चाहदै सम्बन्ध बिग्रीएका उदाहरण पनि हामीले देखेका छौ । यदि तपाँई आफ्नो सम्बन्धलाई लामो समयसम्म टिकाउन चाहानुहुन्छ भने आफूलाई बुझ्ने जीवन साथी रोज्नु आवश्यक हुन्छ ।
हामी सबै सम्बन्धलाई दिर्घायु बनाउन चाहान्छौ । देखेको भरमा हामी कसैको पनि बानी व्यवहार थाहा पाउन सक्दैनौ । तपाईले आफूलाई बुझ्ने र माया गर्ने जीवन साथी रोज्नु आवश्यक हुन्छ । त्यसैले थाहा पाउनुहोस् कस्ती केटीले तपाँईलाई सधै माया गर्छिन् त ।
जो केटी तपाईलाई बिशेष मान्छीन् र तपाँईलाई पनि उनको साथ हुँदा स्पेशल महशुस हुन्छ । यस्ती केटिसँग तपाँईको जीवन सुखले बित्नेछ ।उनले तपाँईको सानो सानो कुरामा ध्यान दिन्छीन् भने उनी तपाईको जीवन साथी बन्नको लागी योग्य छिन् भन्ने सोच्नुहोस् ।
यदि उनी तपाँईको रुची र ईच्छाको बारेमा बताउँछीन्, आफ्नो मन पर्ने र नपर्ने कुराहरु पनि सेयर गर्छिन् भने उनी पनि सम्बन्ध अघि बढाउन चाहान्छीन् । यस्ता केटीहरु सँग सम्बन्ध अघि बढाउँदा समस्या हुदैन ।
यदि उनी आफ्नो बाल्यकालको कुराहरु तपाईसँग सेयर गर्छीन् वा आफ्नो सपनाको बारेमा कुरा गर्छिन् अनि उनलाई मन पर्ने संसारमा सबैभन्दा प्यारो बस्तु के हो ? यस बिषयमा कुरा गर्छीन् भने पनि उनी तपाईलाई चाहान्छीन् । यस्ता कुरा गर्न थालेपछि सम्झनुहोस् उनी तपाँईलाई जिवनभर कदर गर्नेछिन् ।
यदि उनी तपाँई बिना उनलाई एक्लोेपन महशुस गरेको कुरा तपाईलाई भन्छीन् भनेपनि उनी तपाईलाई मनैदेखि चाहान्छीन् । उनका यस्ता कुराहरुबाट के बुझ्नुहोस् भने उ नै तपाईको लागी सहि जीवन साथी हुन सक्छीन् ।आफ्नो भविष्यको बारेमा, बच्चाको बारेमा कुरा गर्न मन पराउँछीन् । तपाँईको घर र कोठा कसरी सजाउने भन्ने सोच्छीन् , तपाँईको जिवनशैली यस्तो होस् भन्ने चाहाना राख्छीन् भने तपाँईको सहि रोजाई हुनेछ यस्तो सोचकी केटि ।
तपाँईसँग आफ्नो सुख दुख बाढ्ने, यदि तपाँई अरु केटिसँग बोल्नु भयो भने उनलाई रिस उठ्ने हुन्छ भनेपनि तपाँईले बुझ्नुपर्यो उनी सँग जीवनभर खुसी रहन सक्छु भन्ने । किनकी यस्ता केटीहरु न आफूले अरुलाई नजर लाउँछन् न तपाईले कसैलाई नजर लाएको मन पराउँछन्।
शारीरिक सम्पर्कको इच्छा भएपछि महिलाले देखाउने ५ ब्यवहार
उसको मायालाई कहिल्यै बिर्सने छैन, एउटा रहरलाग्दो प्रेम कथा !!
बाढी पहिरोले सडक अबरुद्ध, खोटाङसहित तीन जिल्लाका यात्रु अलपत्र
आज विश्वकर्मा पूजा, भगवान कृष्णलाई समून्द्रको बिचमा लुकाएको दिन
संखुवासभाको अक्कर भिरबाट जिप खस्यो, ६ जना बेपत्ता
असोज १० गतेदेखि नयाँ नोट साट्न पाइने
अबको तीन दिन यस्तो रहनेछ मौसम: सतर्कता अपनाउन आग्रह
सप्तकोसीमा पानीको वहाव उच्च, सतर्क रहन आग्रह
काभ्रेमा एकैपटक ७ वटा हेलिकप्टर आकस्मिक अवतरण
सिंहदरबारबाट नौ जना पत्रकार पक्राउ
दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले उपलब्ध गरायो शिक्षक अनुदान कोटा
हुम्ला केन्द्रबिन्दु भएर भुकम्पको धक्का
नेपालगञ्ज विमानस्थलमा मन्त्री योगेश भट्टराईमाथि गालीगलौज